Arsenal oo heshiis shaqsi ahaaneed la gaartay Alexandre Lacazette, Usbuucan ayaa la filayaa in… – Gool FM
Arsenal oo heshiis shaqsi ahaaneed la gaartay Alexandre Lacazette, Usbuucan ayaa la filayaa in…
Byare August 2, 2016
(London) 02 Agoosto 2016. Arsenal ayaa la warinayaa inay heshiis shaqsi ahaaneed la gaartay weeraryahanka kooxda Lyon Alexandre Lacazette, usbuucan ayaana lagu wadaa inay dalab cusub ka gudbiso laacibka.
Usbuucii la soo dhaafay ayay kooxda Lyon xaqiijisay inay iska diiday dalab 29.3-milyan oo bound oo kaga yimid dhanka Gunners ay kaga dooneysay weeraryahankeeda Lacazette.
Laakiin tababaraha kooxda reer France Bruno Genesio ayaa qiray shalay in xagaagan la iibin karayo weeraryahanka reer France.
“Wuu tagi karayaa haddii ay Lyon doonto, waxaa jira dalabyo qaar oo aadan diidi karin,’ Genesio ayaa sidaa yiri.
Warsidaha reer France Le10 Sport ayaa iminka sheeganaya in Gunners ay heshiis shaqsi ahaaneed la gaartay weeraryahanka, waxaana intaa lagu daray in Arsenal ay usbuucan dalab cusub oo ku aadan Lacazette u gudbin doono Lyon.
Tababare Arsene Wenger ayaa qiray inuu suuqa ugu jiro sidii uu ku heli lahaa xagaagan weeraryahan kale, wuxuuna kol horeba ku guul darreystay inu gacanta ku soo dhigo weeraryahanka Leicester City Jamie Vardy.
Olivier Giroud oo seegi doona bilowga xilli ciyaareedka cusub kaddib shaqadii uu ka soo qabtay Euro 2016, iyo Danny Welbeck oo ugu yaraan garoomada ka sii maqnaan doona ilaa sanadka xiga sababo dhaawac la xiriira, Wenger ayaa baaqi ku sii ahaan doona suuqa kala iibsiga.
Lacazette ayaa dhaliyay 21-gool 34-kulan uu ka soo muuqday Ligue 1-ka Faransiiska xilli ciyaareedkii tagay, wuxuuna kula joogaa kooxda Lyon heshiis dhacay ilaa 2019-ka.
Juventus oo u dhaqaaqi doonta saxiixa Blaise Matuidi haddii uu katago Paul Pogba
Chelsea oo diyaar u ah inay Loic Remy qeyb uga dhigto heshiiska ay dib ugu soo ceshaneyso Lukaku